Contraceptive Failures: Part 1 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဘာကွောငျ့ပါလိမျ့? (အပိုငျး ၁)
ယနညေ့နေ ဆေးခနျးစဖှငျ့ခြိနျ လူနာရှငျးတုနျး ဦးတုတျကွီးတဈယောကျ ဆေးခနျးဘကျကို ဦးတညျလြှောကျလာလေ၏။
ဦးတုတျကွီးဆိုသညျမှာ ဒီရပျကှကျမှာ ရှာခံနယျခံ၊ ကြှနျတျော ဒီဆေးခနျးစဖှငျ့တညျးက အစစကူပေး…ဆေးခနျးလာပွ….
တဈခါတဈခါ ကနျြးမာရေးကိစ်စ ဟိုဟိုဒီဒီသူသိခငျြတာလေးတှေ၊ကွားဖူးနားဝရှိတာလေးတှေ လာမေးနကြေ….
ဦးတုတျကွီး – ဆရာ….ဆရာ့ကိုကြှနျတျောသိခငျြတာလေး နညျးနညျးလောကျမေးလို့ရမလား?
ကြှနျတျော – ရတာပေါ့ဗြ….မေးပါဗြာ…(ကြှနျတျော မှနျးထားတဲ့အတိုငျးပငျ….မေးခှနျးမေးဖို့ စခြီလပွေီ…)
ဦးတုတျကွီး – ယောကျြားနဲ့ မိနျးမ ဟိုဒငျးဟိုဟာပွုရငျ ကလေးမရအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲဗြ?
ကြှနျတျော – သွျော…ကိုတုတျကွီးရယျ…ခငျဗြားနှယျ…..ကြှနျတျောလညျး တဈခါပွောပွပွီးပါပကော….ကှနျဒုံး၊တားဆေး…တားဆေးမှာမှ ထိုးဆေး သောကျဆေး၊လကျမောငျးထဲထညျ့တဲ့ပစ်စညျး…သားအိမျထဲထညျ့တဲ့ပစ်စညျး…ကိုယျဝနျတားနညျးတှမှေ စုံလို့ဗြာ….ကြှနျတျောအာပေါကျအောငျ ရှငျးပွထားရတာ….ခငျဗြားက မပေ့လိုကျပွီလားဗြ?
ဦးတုတျကွီး – မမလေို့ကျပါဘူးဆရာရဲ့…. ဒါပမေယျ့….
ကြှနျတျော – ဒါပမေယျ့ ဘာဖွဈတုနျးဗြ?
ဦးတုတျကွီး – ဒါပမေယျ့….ဆရာ့ကိုပွောရတာတော့ အားနာပါတယျ…အဲ့ကိုယျဝနျတားနညျးတှကေလညျး ဆရာတို့ကသာညှနျးနကွေတာ တကယျ့တကယျတမျးတော့ သုံးသုံး မသုံးသုံး ဘာမှ မထူးပါဘူးဗြာ… ရခငျြတဲ့သူက ရတာပဲ….မရခငျြတဲ့သူက မရတာပဲ…
ကြှနျတျော – အနျ….ဘာလို့အဲ့လိုထငျရတာလဲ ..ဆိုစမျးပါဦးဗြာ…
ဦးတုတျကွီး – ကိုယျတှမေို့ပါဗြာ…ကြှနျတော့ အသိညီလေးတဈယောကျဆို သူ့ ကှနျဒုံးသုံးနရေငျး ကလေးရသှားတာလေ..သူ့အမြိုးသမီးကို ဆေးတှမေသောကျခိုငျးခငျြလို့ ကှနျဒုံးသုံးကာမှပဲ ငါးပါးကိုမှောကျရောပဲဗြာ..
ကြှနျတျော – အငျး….ဒါကဒီလိုရှိတယျဗြ….ကှနျဒုံးသုံးနရေဲ့နဲ့ကိုယျဝနျရသှားတျာဆိုတိုငျး ကှနျဒုံးကစိတျမခရြဘူးလို့ ပွောလိျု့တော့မရဘူးဗြ…
ဦးတုတျကွီး – ဆရာက ကှနျဒုံးဘကျက ရှနေ့လေိုကျနပွေနျပွီဗြာ
ကြှနျတျော – ငငျ့…ကြှနျတျောက ကှနျဒုံးဘကျကရှနေ့လေိုကျရအောငျ ကြှနျတျောက ကှနျဒုံးထုတျတဲ့ ကုမ်ပဏီထောငျထားတာမှ မဟုတျတာဗြာ…ဒီမယျ ဦးတုတျကွီး…ကြှနျတျောလညျး လူနာတှနေဲ့နတေို့ငျးထိတှဆေ့ကျဆံနရေတာ….ခငျဗြားပွောသလို ကှနျဒုံးသုံးနရေငျးကိုယျဝနျရသှားတဲ့အတှဲတှတှေဖေူ့းပါ့ဗြာ….ဒါပမေယျ့ ….အဲ့ဒါကှနျဒုံးရဲ့ပွသနာမဟုတျဘူးဗြ
ဦးတုတျကွီး – ဒါဆိုဘယျသူ့ပွသနာတုနျးဗြ?
ကြှနျတျော – ပွသနာက (၃)မြိုးဖွဈနိုငျတယျ…. ပထမတဈခုက ဒိတျလှနျနတေဲ့ ကှနျဒုံးဝယျသုံးမိတာ.. ကှနျဒုံးဆိုတာ တခွားကုနျပစ်စညျးတှလေိုပဲ သကျတမျးကုနျဆုံးရကျ (Expired Date) ဆိုတာရှိတယျဗြ… ကှနျဒုံးဝယျခြိနျမှာ ကှနျဒုံးရဲ့ သကျတမျးကုနျဆုံးရကျကြျောလှနျနေ (ဒိတျလှနျနတေဲ့) ပွီဆိုရငျ အဲ့ကှနျဒုံးက အာနိသငျမရှိတော့ဘူး…ကိုယျဝနျရဖို့အခှငျ့အလမျးမြားသှားပွီ… ဒုတိယ ကနျဒုံးစှပျတာနညျးလမျးမကလြို့….တခြို့လူတှရှေိတယျ…ကှနျဒုံးကိုဘကျမှားပွီး ပွောငျးပွနျစှပျမိတာ…ပွီးကမြှ ဟာပွောငျးပွနျကွီးဖွဈနတေယျဆိုပွီး အမှနျဘကျကပွနျစှပျပွီးသုံး… အဲ့ကြ ပထမမှားစှပျထားတဲ့ဘကျမှာ ရှကွေ့ေးအရညျတှကေပသှေားပွီးနှငျ့ပွီလေ….အဲ့ရှပွေ့ေးအရညျထဲမှာလညျး သုတျပိုးတှပေါသှားနိုငျတော့အဲ့ကတဈဆငျ့ကိုယျဝနျရသှားတာမြိုးပေါ့….နောကျတဈခုကတော့….ကှနျဒုံးပေါကျပွဲသှားတာမြိုး…..ဘာအကွောငျးကွောငျ့ပဲကှနျဒုံးပေါကျပေါကျ……..အတူနနေတေဲ့အခြိနျမှာကှနျဒုံးပေါကျသှားပွီဆိုရငျတော့…ကိုယျဝနျရဖို့ အှငျ့အလမျးမြားသှားပွီ…
ဦးတုတျကွီး – တှလေ့ား ဆရာ…ကြှနျတျောပွောသားပဲ…ကှနျဒုံးက စိတျမခရြပါဘူးလို့…….ကနျတော့ပါရဲ့…. အတူနပေါတယျဆိုမှ…ကှနျဒုံးမပွဲသှားအောငျ အရှိနျလြှော့လုပျရမလို…..ပွီးကြ.. ပေါကျသှားရငျလညျး ကိုယျဝနျကရဦးမယျ….
ကြှနျတျော – ဟိုး… ဟိုး….နပေါဦးဗြ….ကြှနျတျောပွောတာလညျးဆုံးအောငျနားထောငျပါဦးဗြ….ကှနျဒုံးပေါကျသှားတယျဆိုတာ အရှိနျပွငျးလို့မဟုတျဘူး…အရှိနျလညျးလြှော့စရာမလိုပါဘူးဗြာ…..အဓိကက…. ကှနျဒုံးကိုဖောကျတဲ့အခါ…သူ့အရာပေးထားတဲ့အတိုငျး လကျနဲ့ဖွဲလိုကျရုံပဲ….အဲ့ဒါကို တခြို့က ကတျကွေးနဲ့ညှပျဖောကျတယျ…..တခြို့က သှားနဲ့ကိုကျဖောကျတယျ….အဲ့မှာတငျ အထဲက ကှနျဒုံးအသားပါသှားပွီး ပေါကျတာ….နောကျတဈခုက လကျက လကျသညျးနဲ့ငွိတာ….လကျစပျက အခြှနျအထကျတှနေဲ့ ငွိတာမြိုးပေါ့……နောကျရှိသေးတယျ…ဘယျသူ့ဘယျသူက တလှဲတှလေမျးညှနျလိုကျတယျမသိ…..ကှနျဒုံးကိုနှဈထပျစှပျတာ….ကှနျဒုံးကိုနှဈထပျစှပျရငျ ပိုစိတျမခရြတဲ့အပွငျ ကှနျဒုံးနှဈခုကွား ပှတျတိုကျမှုဖွဈပွီး ပေါကျပွဲဖို့ပိုလှယျသှားရောဗြ…
နောကျဆုံးတဈခုကနျြသေးတယျ…..အဲ့ဒါကတော့ ကှနျဒုံးအရှယျအစားပေါ့……ကှနျဒုံးမှာလညျး အဝတျအစားလိုပဲ သူ့ဆိုဒျနဲ့သူရှိတယျ…ကိုယျနဲ့တျောမယျ့ အရှယျရှေးဝယျပေါ့….မဟုတျဘဲ… ကိုယျနဲ့ အရမျးခြောငျနတော…. အရမျးကပျြနတောမြိုးဝယျသုံးမိရငျ ပေါကျဖို့ပိုလှယျသှားတာပေါ့…..
ဦးတုတျကွီး – သွျော…..ဒီလိုကိုး….ဒါဆို ကှနျဒုံးပေါကျသှားရငျ ကလေးမရအောငျ ဘယျလိုပွနျလုပျရမလဲဆရာ? ကြှနျတျောလညျး ကြှနျတေျာ့ပတျဝနျးကငျြကလူတှကေို အသိပညာပွနျမြှလို့ရတာပေါ့ဆရာရယျ….
ကြှနျတျော – ကှနျဒုံးပေါကျသှားပွီဆိုရငျ အရေးပေါတားဆေးကို 72 နာရီ (3ရကျအတှငျး) သောကျရတယျဗြ….၃ရကျအတှငျးဆိုပမေယျ့ စောစောသောကျနိုငျလေ…အာနိသငျပိုရှိလပေဲမို့လို့ တတျနိုငျသမြှစောစောသောကျတာကောငျးတယျဗြ..
ဦးတုတျကွီး – ဟုတျကဲ့…. ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆရာရယျ….ခုလိုကြှနျတေျာ့ကို စိတျရှညျလကျရှညျနဲ့ရှငျးပွပေးတာ…ဒါပမေယျ့…..သောကျဆေးသောကျနရေဲ့နဲ့ ကိုယျဝနျရသှားတာကရော? အဲ့ကိစ်စတော့ ကြှနျတျော သိပျမရှငျးသေးဘူးဗြ…..
ဆရာ – သောကျဆေးသောကျနရေငျးကိုယျဝနျ…… ဟော…စကားကောငျးနတေုနျး နောကျမှာလူနာရောကျလာပွီ….ကဲ….တားဆေးဇာတျလမျးနောကျနဆေ့ကျကွတာပေါ့ဗြာ…..
ဦးတုတျကွီး – ဟုတျကဲ့ပါဆရာရေ….နကျဖွနျမှ ထပျလာခဲ့တော့မယျ…ခှငျ့ပွုပါဦးဗြာ…..
ဘာကြောင့်ပါလိမ့်? (အပိုင်း ၁)
ယနေ့ညနေ ဆေးခန်းစဖွင့်ချိန် လူနာရှင်းတုန်း ဦးတုတ်ကြီးတစ်ယောက် ဆေးခန်းဘက်ကို ဦးတည်လျှောက်လာလေ၏။
ဦးတုတ်ကြီးဆိုသည်မှာ ဒီရပ်ကွက်မှာ ရွာခံနယ်ခံ၊ ကျွန်တော် ဒီဆေးခန်းစဖွင့်တည်းက အစစကူပေး…ဆေးခန်းလာပြ….
တစ်ခါတစ်ခါ ကျန်းမာရေးကိစ္စ ဟိုဟိုဒီဒီသူသိချင်တာလေးတွေ၊ကြားဖူးနားဝရှိတာလေးတွေ လာမေးနေကျ….
ဦးတုတ်ကြီး – ဆရာ….ဆရာ့ကိုကျွန်တော်သိချင်တာလေး နည်းနည်းလောက်မေးလို့ရမလား?
ကျွန်တော် – ရတာပေါ့ဗျ….မေးပါဗျာ…(ကျွန်တော် မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပင်….မေးခွန်းမေးဖို့ စချီလေပြီ…)
ဦးတုတ်ကြီး – ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ဟိုဒင်းဟိုဟာပြုရင် ကလေးမရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ?
ကျွန်တော် – သြော်…ကိုတုတ်ကြီးရယ်…ခင်ဗျားနှယ်…..ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါပြောပြပြီးပါပကော….ကွန်ဒုံး၊တားဆေး…တားဆေးမှာမှ ထိုးဆေး သောက်ဆေး၊လက်မောင်းထဲထည့်တဲ့ပစ္စည်း…သားအိမ်ထဲထည့်တဲ့ပစ္စည်း…ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေမှ စုံလို့ဗျာ….ကျွန်တော်အာပေါက်အောင် ရှင်းပြထားရတာ….ခင်ဗျားက မေ့ပလိုက်ပြီလားဗျ?
ဦးတုတ်ကြီး – မမေ့လိုက်ပါဘူးဆရာရဲ့…. ဒါပေမယ့်….
ကျွန်တော် – ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်တုန်းဗျ?
ဦးတုတ်ကြီး – ဒါပေမယ့်….ဆရာ့ကိုပြောရတာတော့ အားနာပါတယ်…အဲ့ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေကလည်း ဆရာတို့ကသာညွှန်းနေကြတာ တကယ့်တကယ်တမ်းတော့ သုံးသုံး မသုံးသုံး ဘာမှ မထူးပါဘူးဗျာ… ရချင်တဲ့သူက ရတာပဲ….မရချင်တဲ့သူက မရတာပဲ…
ကျွန်တော် – အန်….ဘာလို့အဲ့လိုထင်ရတာလဲ ..ဆိုစမ်းပါဦးဗျာ…
ဦးတုတ်ကြီး – ကိုယ်တွေ့မို့ပါဗျာ…ကျွန်တော့ အသိညီလေးတစ်ယောက်ဆို သူ့ ကွန်ဒုံးသုံးနေရင်း ကလေးရသွားတာလေ..သူ့အမျိုးသမီးကို ဆေးတွေမသောက်ခိုင်းချင်လို့ ကွန်ဒုံးသုံးကာမှပဲ ငါးပါးကိုမှောက်ရောပဲဗျာ..
ကျွန်တော် – အင်း….ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဗျ….ကွန်ဒုံးသုံးနေရဲ့နဲ့ကိုယ်ဝန်ရသွားတ်ာဆိုတိုင်း ကွန်ဒုံးကစိတ်မချရဘူးလို့ ပြောလို့်တော့မရဘူးဗျ…
ဦးတုတ်ကြီး – ဆရာက ကွန်ဒုံးဘက်က ရှေ့နေလိုက်နေပြန်ပြီဗျာ
ကျွန်တော် – ငင့်…ကျွန်တော်က ကွန်ဒုံးဘက်ကရှေ့နေလိုက်ရအောင် ကျွန်တော်က ကွန်ဒုံးထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီထောင်ထားတာမှ မဟုတ်တာဗျာ…ဒီမယ် ဦးတုတ်ကြီး…ကျွန်တော်လည်း လူနာတွေနဲ့နေ့တိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာ….ခင်ဗျားပြောသလို ကွန်ဒုံးသုံးနေရင်းကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့အတွဲတွေတွေ့ဖူးပါ့ဗျာ….ဒါပေမယ့် ….အဲ့ဒါကွန်ဒုံးရဲ့ပြသနာမဟုတ်ဘူးဗျ
ဦးတုတ်ကြီး – ဒါဆိုဘယ်သူ့ပြသနာတုန်းဗျ?
ကျွန်တော် – ပြသနာက (၃)မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်…. ပထမတစ်ခုက ဒိတ်လွန်နေတဲ့ ကွန်ဒုံးဝယ်သုံးမိတာ.. ကွန်ဒုံးဆိုတာ တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေလိုပဲ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် (Expired Date) ဆိုတာရှိတယ်ဗျ… ကွန်ဒုံးဝယ်ချိန်မှာ ကွန်ဒုံးရဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကျော်လွန်နေ (ဒိတ်လွန်နေတဲ့) ပြီဆိုရင် အဲ့ကွန်ဒုံးက အာနိသင်မရှိတော့ဘူး…ကိုယ်ဝန်ရဖို့အခွင့်အလမ်းများသွားပြီ… ဒုတိယ ကန်ဒုံးစွပ်တာနည်းလမ်းမကျလို့….တချို့လူတွေရှိတယ်…ကွန်ဒုံးကိုဘက်မှားပြီး ပြောင်းပြန်စွပ်မိတာ…ပြီးကျမှ ဟာပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး အမှန်ဘက်ကပြန်စွပ်ပြီးသုံး… အဲ့ကျ ပထမမှားစွပ်ထားတဲ့ဘက်မှာ ရှေ့ကြေးအရည်တွေကပေသွားပြီးနှင့်ပြီလေ….အဲ့ရှေ့ပြေးအရည်ထဲမှာလည်း သုတ်ပိုးတွေပါသွားနိုင်တော့အဲ့ကတစ်ဆင့်ကိုယ်ဝန်ရသွားတာမျိုးပေါ့….နောက်တစ်ခုကတော့….ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲသွားတာမျိုး…..ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲကွန်ဒုံးပေါက်ပေါက်……..အတူနေနေတဲ့အချိန်မှာကွန်ဒုံးပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့…ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အွင့်အလမ်းများသွားပြီ…
ဦးတုတ်ကြီး – တွေ့လား ဆရာ…ကျွန်တော်ပြောသားပဲ…ကွန်ဒုံးက စိတ်မချရပါဘူးလို့…….ကန်တော့ပါရဲ့…. အတူနေပါတယ်ဆိုမှ…ကွန်ဒုံးမပြဲသွားအောင် အရှိန်လျှော့လုပ်ရမလို…..ပြီးကျ.. ပေါက်သွားရင်လည်း ကိုယ်ဝန်ကရဦးမယ်….
ကျွန်တော် – ဟိုး… ဟိုး….နေပါဦးဗျ….ကျွန်တော်ပြောတာလည်းဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးဗျ….ကွန်ဒုံးပေါက်သွားတယ်ဆိုတာ အရှိန်ပြင်းလို့မဟုတ်ဘူး…အရှိန်လည်းလျှော့စရာမလိုပါဘူးဗျာ…..အဓိကက…. ကွန်ဒုံးကိုဖောက်တဲ့အခါ…သူ့အရာပေးထားတဲ့အတိုင်း လက်နဲ့ဖြဲလိုက်ရုံပဲ….အဲ့ဒါကို တချို့က ကတ်ကြေးနဲ့ညှပ်ဖောက်တယ်…..တချို့က သွားနဲ့ကိုက်ဖောက်တယ်….အဲ့မှာတင် အထဲက ကွန်ဒုံးအသားပါသွားပြီး ပေါက်တာ….နောက်တစ်ခုက လက်က လက်သည်းနဲ့ငြိတာ….လက်စပ်က အချွန်အထက်တွေနဲ့ ငြိတာမျိုးပေါ့……နောက်ရှိသေးတယ်…ဘယ်သူ့ဘယ်သူက တလွဲတွေလမ်းညွှန်လိုက်တယ်မသိ…..ကွန်ဒုံးကိုနှစ်ထပ်စွပ်တာ….ကွန်ဒုံးကိုနှစ်ထပ်စွပ်ရင် ပိုစိတ်မချရတဲ့အပြင် ကွန်ဒုံးနှစ်ခုကြား ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး ပေါက်ပြဲဖို့ပိုလွယ်သွားရောဗျ…
နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်သေးတယ်…..အဲ့ဒါကတော့ ကွန်ဒုံးအရွယ်အစားပေါ့……ကွန်ဒုံးမှာလည်း အဝတ်အစားလိုပဲ သူ့ဆိုဒ်နဲ့သူရှိတယ်…ကိုယ်နဲ့တော်မယ့် အရွယ်ရွေးဝယ်ပေါ့….မဟုတ်ဘဲ… ကိုယ်နဲ့ အရမ်းချောင်နေတာ…. အရမ်းကျပ်နေတာမျိုးဝယ်သုံးမိရင် ပေါက်ဖို့ပိုလွယ်သွားတာပေါ့…..
ဦးတုတ်ကြီး – သြော်…..ဒီလိုကိုး….ဒါဆို ကွန်ဒုံးပေါက်သွားရင် ကလေးမရအောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆရာ? ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို အသိပညာပြန်မျှလို့ရတာပေါ့ဆရာရယ်….
ကျွန်တော် – ကွန်ဒုံးပေါက်သွားပြီဆိုရင် အရေးပေါတားဆေးကို 72 နာရီ (3ရက်အတွင်း) သောက်ရတယ်ဗျ….၃ရက်အတွင်းဆိုပေမယ့် စောစောသောက်နိုင်လေ…အာနိသင်ပိုရှိလေပဲမို့လို့ တတ်နိုင်သမျှစောစောသောက်တာကောင်းတယ်ဗျ..
ဦးတုတ်ကြီး – ဟုတ်ကဲ့…. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာရယ်….ခုလိုကျွန်တော့်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရှင်းပြပေးတာ…ဒါပေမယ့်…..သောက်ဆေးသောက်နေရဲ့နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာကရော? အဲ့ကိစ္စတော့ ကျွန်တော် သိပ်မရှင်းသေးဘူးဗျ…..
ဆရာ – သောက်ဆေးသောက်နေရင်းကိုယ်ဝန်…… ဟော…စကားကောင်းနေတုန်း နောက်မှာလူနာရောက်လာပြီ….ကဲ….တားဆေးဇာတ်လမ်းနောက်နေ့ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာ…..
ဦးတုတ်ကြီး – ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေ….နက်ဖြန်မှ ထပ်လာခဲ့တော့မယ်…ခွင့်ပြုပါဦးဗျာ…..